Ukudibanisa amaqhinga okwandisa i-imeyile yakho yokuzibandakanya | Martech Zone
NgoLwesibini, Aprili 7, 2015 UMat Caldwell
I-imeyile iye yazibophelela kwintengiso okoko kwaqalwa iqonga. Apho "imeyile ye-elektroniki" yakuba ibonise iposi ekwimo kunye nokusebenza, ukuguquguquka kweqonga kuthetha ukuba umyalezo ngamnye kufuneka ubengumntu, uguquguquke kwaye ubandakanyeke kubaphulaphuli abahlukeneyo.
Kulo nyaka, abathengisi kufuneka bayeke ukuqaphela ubuchwephesha be-imeyile kunye namaqhinga njengezixhobo ezizimeleyo, kodwa kunoko njengeenxalenye zepuzzle enkulu, ebandakanyekayo. Ukwenza njalo kuya kuvumela abathengisi ukuba bafumane ubuchule, ubuqili kunye nokuqonda ngeendlela zabo ze-imeyile. Nazi iindlela ezimbalwa onokuthi uqhelene nazo kunye nendlela yokudibanisa ukubandakanyeka okukhulu.
Ukudibanisa umxholo onamandla kunye nokudibana kwe-mega
Xa utshatile kunye, ukudibana kwe-mega kunye nokubonisa umxholo onamandla zizibini ezinamandla. Sebenzisa ukudibana kwe-mega kunye nokuboniswa komxholo onamandla, abathengisi be-imeyile banokwenza imiyalezo ye-imeyile ebhalwe igama lomntu ngamnye obhalisileyo. Nantsi indlela esebenza ngayo.
Ukudibana kweMega Sebenzisa i-mega merge, abathengisi banokutsala ulwazi lwedemokhrasi kunye nembali kumxholo we-imeyile. Sifumene ukuba ngokufuthi igama lomthengi likhankanywa, i-imeyile iphumelela ngakumbi. "Othandekayo [igama]" akwanelanga. Ukudityaniswa kwe-mega, abathengisi banokwenza igama lomntu, indawo okanye ezinye iimpawu zokwenza i-imeyile ngokuzenzekelayo. Esi sibonelelo songeziweyo sokwalathisa amehlo omfundi apho ufuna khona ngegama lomfundi okanye olunye ulwazi oluhlanganisiweyo.
Umboniso womxholo onamandla -Yonke idatha yomthengi ethathwe kumdibaniso mega unokuthi emva koko udityaniswe kwi-imeyile ngokufunwayo kwaye uhlengahlengiswe kumbhalisi ngamnye we-imeyile. Njengoko igama lisitsho, utshintsho kumxholo onamandla ngokusekwe kwigalelo. Ezona vidiyo zinempumelelo zomxholo okanye izilayidi zibandakanya ulwazi oludibeneyo.
Umzekelo, kwinkampani enkulu yokubuka iindwendwe kutshanje Unyaka Wokubuyiselwa i-imeyile, inkampani yatsala amagama abanini mivuzo, zingaphi iihotele- kunye nendawo - abanini mivuzo ethile abahlala kuyo, kunye neehotele ezinconywayo kunye neendawo ezisekwe kwimbali yokuhlala. Umxholo odityanisiweyo mega utshintshiwe ngokusekwe kwidilesi ye-imeyile. Ke akukho bantu babini abafumene i-imeyile efanayo - umnini ngamnye wemivuzo ufumene ividiyo eyahlukileyo eyenzelwe amava abo.
Ezinye izinto eziphambili zidityanisiwe
Intengiso ye-imeyile ye-Smart ayipheli ngomtshato wokudibana kwe-mega kunye nomxholo onamandla. Abathengisi banokwandisa ukuthengisa kwabo nge-imeyile ngokudibanisa amaqhinga emveli kunye netekhnoloji entsha.
Iselfowuni sinokutsalwa okungafunekiyo Ezona imeyili zisebenzayo ziya kuvumela umxholo ukuba uhlengahlengise apho umthengi evula khona i-imeyile (ifowuni, idesktop, njl.njl.), Kwaye ube neepesenti ezingama-21 eziphezulu zokucofa. Kodwa uyilo oluphendulayo aluyonto intsha kwaye abathengisi banokuthatha inyathelo elinye ukuya phambili nge Ubume be-hybrid obunokuhamba obunokuhamba ebonelela ngolwakhiwo olunye lwezikrini ezinkulu nezincinci ngokufanayo. Elona candelo lililo malunga noyilo? Iyafundwa ngepesenti eyi-100 kwaye ayifuni ukuba abasebenzisi bonge okanye bacofe. Ngokusisiseko, olu loyilo oluphendulayo lwenziwe ngokufanelekileyo.
Izicatshulwa zoluntu -I-imeyile ilungile, kodwa yomelele xa idityaniswa nemidiya yoluntu. Abathengisi banokwandisa imizamo yabo yokuthengisa ngokuphumeza izicatshulwa zentlalo Umxholo wentlalontle (njengeetweets, iifoto okanye izimvo) ezitsalwa ngqo kumyalezo we-imeyile. Oku kubonelela ngohlaziyo lwexesha lokwenyani lokuphendula kwabathengi kwi-brand, kwaye yindlela elungileyo yokubandakanya abaphulaphuli be-imeyile.
Ngokubandakanya izicatshulwa zentlalo kwi-imeyile, iimveliso zinokukhuthaza ababhalisile ukuba babelane ngeentengiselwano, eziya kuthi zivumele abathengisi ukuba balandele abaxhasi beempawu kunye nokulungelelanisa izivumelwano zexesha elizayo kwabo banefuthe.
Ipesenti ye-100 ifundeka nemifanekiso icinyiwe Kunyaka ophelileyo, uGoogle uyifumene loo nto ukuvimba umfanekiso iipesenti ezingama-43 ze-imeyile, umceli mngeni kubathengisi ukunxibelelana nabathengi ngokukhawuleza kunye nokungcolisa imbonakalo ye-imeyile. Nangona kunjalo, ukudibanisa imifanekiso kunye nomxholo kunye nobuchwephesha obutsha kuvumela iimveliso ukuba zinxibelelane nabathengi babo, ngaphandle kwezakhelo ze-imeyile.
Ipesenti ezilikhulu efundekayo enemifanekiso ekhutshelweyo iqinisekisa ukuba konke okubhaliweyo kuyaboniswa kwaye kuyafundeka, nokuba imifanekiso ilayishiwe okanye ayilayishwanga, ivumela ii-brand ukuba zenze umbono omkhulu ngee-imeyile zazo kwaye zinxibelelane nomyalezo wazo ngokufanelekileyo.
Umxholo oncamathelayo -I-imeyile yokukhuthaza kunye nentengiso ibalulekile ekonyuseni ingeniso, kodwa yomelele xa idityaniswe nomxholo oncamathelayo-umyalezo osekwe kumxholo ongathengisi ngokuthe ngqo kumbhalisi, kodwa endaweni yoko uhambisa imiyalezo enomdla kunye nefanelekileyo (imibuzo, iingcebiso, njl. Olu hlobo lomxholo yonyusa i-imeyile ivulwa nge-12-24%.
Abathengi abasoloko bekwindawo yokuthenga, kwaye ngenxa yoko, abakhangeli ii-imeyile zentengiso. Ngokuzenzela ii-imeyile ngokusekwe kumjikelo wobomi wabathengi, abathengisi banokugcina amacandelo athile abandakanyekile de bakulungele ukuthenga kwakhona.
Iphulo elikhulu lokuthengisa nge-imeyile kufuneka linike iziphumo ezinje ngokunyuka konqakrazo, ukuvula kunye nokuthenga. Ukudibanisa ubuchwephesha kunye namaqhinga, abathengisi be-imeyile banokuhambisa imiyalezo ebandakanyekayo ngokufanelekileyo ukugqitha iinjongo zabo zentengiso. Ukubona ezinye zezona ntengiso zentengiso ze-imeyile, jonga kulo nyaka Uyilo lwe-imeyile incwadi yokujonga evela kuYesmail.
tags: Umxholo onamandlaUkubandakanya i-imeyileI-imeyile yomfanekiso we-alt tagsimifanekiso ye-imeyileemail Marketingimeyile yentlaloUbume be-hybridukuvimba umfanekisoUkudibanisa megaUyilo lwe-imeyile ephathekayoUyilo lweselfowuniizinga elivulekileyoUbume be-imeyile obunokutshaizicatshulwa zentlaloUmxholo oncamathelayoEwe
Uvulindlela woyilo lwe-imeyile ukusukela ngo1999, ungumseki we EweIqela leeNkonzo zoBuchule eliphumelele amabhaso (abathengi babandakanya i-HP, Coca-Cola, At & T, eBay, Kodak, Microsoft, Intel, Warner Bros kunye nezinye ezininzi). UMatthew ufumene isidanga seBachelor kwiNtengiso kwiDyunivesithi yaseIndiana kwaye wafunda ubuGcisa / iGraphic Design kwiPacific Northwest College yeArt kunye neOregon College yeArt & Craft. UMateyu wayekade enguMlawuli wezoBuchule weTrustustMaster, Labtech, Logitech kunye @Once.
Izizathu ezisi-7 zokuba umxholo wakho usilele ukunxulumana neMillennium
I-MockupsJar: I-Stock Mockups zeSelfowuni kunye neDesktop